प्रचण्ड दिक्क, भन्छन्– लाग्दैछ खेती गर्न जाऊँ – Articles Nepal
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दैनिकी राजनीतिमै बित्छ । तात्कालीन एमालेसँगको एकतापछि पार्टीमा यतिबेला तल्ला कमिटीको एकता किचलो छ । पछिल्ला दिन भने दाहाल यो किचलोबाट दिक्क भएका रहेछन् ।
आज भक्तपुरमा तरकारी बजार उद्घाटन गर्न पुगेका दाहालले राजनीतिक खेलवाट आफूलाई दिक्क भएको खुलासा गरे । भने, ‘दिक्क लागेको समयमा खेती गर्न जाँउ जस्तो लाग्न थालेको छ । ’ सबै कुरा नमिलेको देख्दा कहिलेकाँही दिक्क लाग्ने गरेको उनले बताए । यस्तो समयमा आफूलाइ खेती गर्न जाउँ जस्तो लाग्न थालेको उनले बताए । उद्घाटनकाक्रममा देशको समृद्धि कृषिबाट आउने बताएका दाहालले तर कृषिलाई आधुनिकीकरण भने गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अनुसन्धानमा राज्यले लगानी गर्नेपक्षमा उनको मत छ । क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्नुमा खेतीपातीमा रासायनिक मल र विषादी कारण बनेको उनको भनाइ छ । उनले अब अग्र्यानिक खेती गर्नु पर्ने समय आएको बताए । राज्यको शिक्षा नीति प्रविधिमैत्री नहुँदा उच्च शिक्षा हाँसिल गरेर विदेश जाने प्रवृति भएको बताए । उनले भने, ‘विदेशमा धेरै मेहनत गरेका छन् । खाडीमा बगेको पसिना नेपालमा नै बगाउन सके समृद्धि छिटै आउँछ ।’ shilapatra.com बाट
Previous Post: कर नतिरेकाे निहुँमा एनसेलमाथि आक्रमण, ठीक कि बेठीक ?
Next Post: बधाई ! नेपालका आयुषले दिए भारतको‘सारेगमप’मा धमाकेदार प्रस्तुती – भिडियो